Macallin Mauricio Pochettino oo markiisii ugu horreysay la arkay tan iyo markii laga cayriyey shaqada Tababarenimo ee Kooxda Tottenham… + SAWIRRO – Gool FM
Macallin Mauricio Pochettino oo markiisii ugu horreysay la arkay tan iyo markii laga cayriyey shaqada Tababarenimo ee Kooxda Tottenham… + SAWIRRO
Haaruun December 2, 2019
(Rosario) 02 Dis 2019. Macallin Mauricio Pochettino ayaa la arkay markii ugu horreysay tan iyo markii laga buriyey shaqada Tababarennimo ee Kooxda Tottenham.
Mauricio Pochettino ayaa sawirro laga soo qaaday markii ugu horreysay tan iyo shaqo ka cayrintiisii Spurs, isagoo booqday Naadiga Newell’s Old Boys ee ka dhisan dalkiisa Argentina.
47-sano jirkaan ayaa kabihiisa u illaday inuu booqasho ku bixiyo kooxdan Newell’s Old Boys ee ka dhisan Waddankiisa, kaddib markii uu Tottenham geeyay kaalinta 14-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, isla markaana uu kaliya saddex guulood la gaaray kal ciyaareedkan intii uu laylinayey.
Iyadoo ay jiraan warar joogto ah oo la isla dhex-marayo kuwaasoo ku saabsan halka mustaqbalkiisa uu yaallo ayaa haddana Pochettino wuxuu ku qaatay waqtigiisa fasaxa inuu ku laabto halka uu ka soo bilaabay xirfaddiisa ciyaaraha.
Waxa uu dib ugu laabtay Naadiga Newell’s Old Boys oo ka dhisan Argentina, taasoo ah kooxdii ugu horreysay ee uu ebid u ciyaaro intii u dhaxaysay sanadihii 1989-kii illaa 1994-kii.
Markii uu yimid waxaa salaamay xubnahana hadda iyo waaxda shaqaalaha kooxda ee iminka, waxaana la soo bandhigay isagoo sare u haya maaliyadda koowaad ee kooxda oo Frame la galiyey, taasoo uu dhabarka dambe kaga qoran yahay lambarka 6-aad iyo magaciisa Pochettino.
Intii lagu guda jiray shantii sano ee uu ku qaatay kooxda, Pochettino kaasoo ka ciyaarayey daafaca ayaa dhaliyey siddeed gool 153 kulan oo uu u saftay kooxdan.
Intaas kaddib Pochettino waxa uu waqti la qaatay oo uu u ciyaaray kooxaha Espanyol, Paris-Saint-Germain iyo Bordeaux ka hor inta uusan tallaabo u qaadin heerkiisa maamul ee tababarenimo.
Pochettino ayaa Tababare u ahaa kooxda Tottenham tan iyo sanadkii 2014-kii, kaddib heshiis shan sano iyo bar ah oo uu xukunkeeda kula wareegay, lama oga inuu xirfaddiisa macallinnimo halkaas ku soo gabagabayn doono inta uusan masuul ka noqon koox kale.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii uu ka tagay Spurs kooxo waa weyn oo ka dhisan qaaradda Yurub ayaa la la xiriirinayey macallin Mauricio Pochettino, kuwaasoo ay ka mid yihiin Bayern Munich, Real Madrid, Arsenal iyo Manchester United.